Meydka gabar yar oo laga helay duleedka magaalada Dhuusamareeb, booliska ayaa xaqiijiyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Meydka gabar yar oo laga helay duleedka magaalada Dhuusamareeb, booliska ayaa xaqiijiyay
Meydka gabar yar oo laga helay duleedka magaalada Dhuusamareeb, booliska ayaa xaqiijiyay
Deegaanka Bohol oo qiyaastii 12 KM u jirta Magaalada Dhuusamareeb.
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in duleedka Magaalada laga helay maydka gabar yar, sida Booliska ay sheegeen.
Maydka gabadhaan yar ayaa waxaa laga soo qaaday deegaanka Bohol oo qiyaastii 12 KM u jirta Magaalada Dhuusamareeb.
Ciidamada Booliska ka howlgalla Magaalada Dhuusamareeb ayaa tegay deegaanka Bohol, iyaga oo halkaasi kasoo qaadey meydka Gabadha Yar sidoo kale ay falkaasi u soo qabteen Hooyada Dhashay Gabadha yar iyo Saygeeda.
Lama oga ilaa iyo hadda cida dishay gabadhaan yar ee maydkeeda duleedka laga helay Magaalada Dhuusamareeb.
Saldhiga Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa lagu haayaa Hooyada dhashay gabadha yar iyo Saygeeda, halkaasi oo baaritaan uu ka socdo.
Meydka gabar yar oo laga helay duleedka magaalada Dhuusamareeb